Nhau - Asynchronous mota musika yekusimudzira mari yemari maonero akanaka
IE1 Matatu matatu asynchronous mota
IE2 Matatu matatu asynchronous mota
IE3 Matatu matatu asynchronous mota
MS Aluminium goko Tatu chikamu asynchronous mota
Russian Standard mota (Diki Base Yakakwira Simba)
Matatu-chikamu asynchronous mota kune giya rinodzora
Matatu-chikamu asynchronous mota yepombi pombi
Matatu-chikamu asynchronous mota yematombo michina uye yekuveza michina
Mvura-yakanyorova matatu-chikamu asynchronous mota
YB3 Flameproof matatu danho asynchronous mota
YD2 Multi-Stage Inoshanduka Yekumhanyisa Matatu-Pasika Asynchronous mota
YEJ2 Electromagnetic Braking Brake Matatu-Pasika Asynchronous mota
YVP inoshanduka frequency frequency matatu-chikamu asynchronous mota
YXP Matatu-chikamu asynchronous mota yeakanyanya tembiricha moto kurwa uye utsi chiutsi
Kutonhora Shongwe mota
Asynchronous mota musika wekusimudzira mari yemari maonero akanaka
Iyo yazvino vhezheni ye2020 yemusika wekudzidza paAsynchronous Motor Market inosanganisira 103 nemusika wedata Matafura, maChati, maGirafu, uye maFigure ayo ari nyore kunzwisisa nekuratidzwa kwakadzama-kwakadzika kuongorora.
Iyo Coronavirus Pandemic (COVID-19) yakanganisa mativi ese ehupenyu pasirese. Izvi zvakakonzera shanduko dzinoverengeka mumamiriro emusika. Chirevo ichi chinofukidza mamiriro ekushanduka ari kukurumidza uye ongororo yekutanga uye yemberi.
An asynchronous motor, inonziwo induction mota, ndiyo imwe mota iriko. Iyo stator coil inoshandisa electromagnetic induction kuti iite yazvino kune iyo rotor, uye mota inoburitsa torque, saka hapana magineti anogara aripo anodiwa. Asynchronous mota dzinogona kuganhurwa mumakamuri anotenderera uye matanga e squirrel muchimiro che rotor windings. Rudzi rwekutenderera idanho rematanho matatu, uye mhando yekereji yeshiri ine matatu-chikamu mota uye imwechete-chikamu mota. Iyo rotor ye squirrel keji induction mota inogona kusunganidzwa kumatunhu ekunze kune mota.
Sekutsvagurudza nekudzidza, musika wakagadzirisa kuvapo kwawo pasirese. Asynchronous Mota Musika Yekutsvagisa kudzidza inopa kuongororwa kwakazara kweMusika uye kunosanganisira remangwana maitiro, azvino ekukura zvinhu, pfungwa dzakatarisana, ruzivo, uye indasitiri yakasimbiswa data yemusika.
Vatambi veGlobal Market, avo vachange vachibuda uye kukunda 2020 muAsynchronous Motor Market
Kutarisa ku2020, musika wepasi rose unotarisirwa kuve gore rakakosha reAsynchronous Motor Market maererano nekukura nemari.
Anenge makambani ese akanyorwa kana akafuridzirwa ari kusimudzira mafomu avo ekupedzisira-mushandisi ruzivo uye kumisikidza yavo yekugara base muna 2020. Chirevo ichi chakanangisa nekutarisa kumakambani aya anosanganisira Bosch Rexroth, SIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Maindasitiri, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmotor, Dongming, MOTOR, -Beloit, ABM Greiffenberger.
Pamusoro pezvo, kutsvagurudza kunopa muongororo wakadzama wedanho repakati-rakakamurwa senge rinotungamira kukura kwenharaunda, nyika dzine mugove wepamusorosoro wemari mune yakapfuura uye yazvino mamiriro. Zvimwe zvekuparadzaniswa kwenzvimbo zvakasanganisirwa muchidzidzo ichi North America (Yakafukidzwa muChitsauko 7 ne14), United States, Canada, Mexico, Europe (Yakafukidzwa muChitsauko 8 ne14), Germany, UK, France, Italy, Spain, Rashiya.
Iine Asynchronous mota musika inofungidzirwa kuwedzera CAGR% muna 2020 uye neXXX inofanirwa kuve mubatsiri mukuru, iri nani pane ZZZZ ye2020.
Kuyerera kwezvikamu zvebhizinesi nyowani kunogogodza mugore ra2020 yeAsynchronous Motor Market
Zvinoenderana neAMR yekudzidza pamusika, Zvazvino maitiro mune zvevatengi zvavanofarira zvikamu zvemusika senge rudzi, iko kunyorera kuchanyanya kunetsa. Asynchronous mota yemusika chikamu chekutengesa chinodarika iyo $ $ mucherechedzo muna 2020.
Kusiyana nezvikamu zvakakamurwa zvakabudirira muindasitiri senge Rudzi (Matatu-chikamu Asynchronous Mota, Imwe-chikamu Asynchronous Mota) uye neVagumi-Vashandisi / Kunyorera (Mashini Maturu, Kudiki Kudhiraivha, Midziyo, Mapampu, Chiedza Machini, Metallurgical, Mining Machinery, Vamwe).
Iyo 2020 vhezheni yeiyo Asynchronous mota musika kudzidza ndeye kumwe kupatsanurwa pasi / kutetepa kuratidza kutsva kuchiri kubuda kweiyo indasitiri.
Hunhu hwevatengi nekuchinja zvido, Asynchronous mota makambani ari kubvuma sei?
Nekuda kweshanduko mukufarira kwevatengi pamwe nekudzokororwa pane zvichangoburwa zvekutengesa uye zvemari mushumo, Vatengesi vakuru mumusika weGlobal vari kuyedza kutariswa nevashandisi vekupedzisira kana vatengi ne "Zvipiriso uye mamwe masevhisi".
Nekushandisa tekinoroji yazvino uye ongororo pane inoda-padivi, Vatambi vekiyi vari kupinda mukuita kwevatengi uye neshanduko dzavanoda
Zvekare, hombe mafemu ekudyara kana hofori vari kuda kuisa mari yakawanda kuti vawane kiyi yemutambi kuita mumusika wezvishandiso zvitsva kana zvigadzirwa.
Tsvagurudzo Zvinangwa uye Chinangwa
Kubvunza uye kuongorora Asynchronous Saizi yemusika musika nenzvimbo dzakakosha / nyika, chigadzirwa mhando uye chishandiso, yapfuura data kubva 2014 kusvika 2018, uye fungidzira kana fungidzira kusvika 2026.
Kuziva chimiro cheAsynchronous Motor Market nekuziva ayo akati wandei madiki-zvikamu.
Kuti utarise pane yakakosha Asynchronous mota yemusika vatambi, kuona, kutsanangura uye kuongorora kukosha, mugove wemusika, makwikwi emusika musika, SWOT ongororo, uye zvirongwa zvebudiriro mumakore mashoma anotevera.
Kududzira Asynchronous mota musika zvine chekuita nehukuru hwekukura, tarisiro, uye mupiro wavo kumusika wese.
Kugovera ruzivo rwakadzama nezve zvakakosha zvinhu zvinokanganisa kukura kwemusika (kukura kwesimba, mikana, madhiraivha, zvinetswa zvine chekuita neindasitiri nenjodzi).
Kugadzira saizi yeAsynchronous mota Musika, zvine chekuita nenzvimbo dzakakosha, mhando, uye mashandisiro.
Kutsanangura kukwikwidzana zviitiko sekuwedzera, zvibvumirano, zvitsva zvigadzirwa zvinotangisa uye kuwanikwa mumusika uye zvimwe zvakawanda.
Impact Kuongororwa kwe COVID-19 pane Asynchronous mota Musika
Kutenda nekuverenga ichi chinyorwa, iwe unogona zvakare kuwana wega chitsauko chakangwara chikamu kana dunhu rakangwara mushumo shanduro senge North America, Western / Eastern Europe kana Southeast Asia.
Iine iyo yakapihwa data yemusika, Tsvagiridzo paMakambani eGlobal inopa maitiro maererano nezvinodiwa chaizvo. Nyorera AMR